Ụlọ oriri na ọṅụṅụ & ebe nchekwa ndụ abalị - N'imeKildare
Site na ọkụ mepere emepe mara mma na nnọkọ trad na-ekpo ọkụ, ruo gastropubs na ụlọ egwuregwu, ị ga-ahụ ya niile na ọtụtụ ụlọ mmanya mara mma nke Kildare.
Ọ na-amasị mmasị nke ihe nkiri ụlọ mmanya Irish? Enwere ọtụtụ nhọrọ na County Kildare ka ị pụta n'ime obodo ma ọ bụ nweta ndụ mpaghara.
Mgbe a bịara n'ịṅụ mmanya na-amasị gị, ị ga-ahụ nhọrọ dịgasị iche iche na-akparaghị ókè. Maka ndị na-anụ ọkụ n'obi biya, ị gaghị enwe mmechuihu na ihe ngosi biya dị egwu iji lelee yana maka ndị hụrụ mmanya n'anya, ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ndị ọkachamara zụrụ azụ. Ma ọ bụ ikekwe ị na-ahọrọ izuike n'ihu ọkụ na-emeghe na ụlọ mmanya omenala nke nwere iko nke ihe ojii, anyị bụ ụlọ Arthur mgbe niile!
Brennans Kilteel njem
Otu akwụkwọ ochie Irish ochie nwere ọtụtụ ihe ochie na bric-a-brac nwere nnọkọ egwu ọdịnala.
Emi odude ke Clane, The Village Inn bụ ezinụlọ ezinụlọ na-agba ọsọ azụmaahịa nke nnukwu ọrụ na nnukwu ọrụ.